Music Education | MPS Institute of Music
The Bachelor of Arts in Music Education prepares you to becomeamusic educator leading the Myanmar music society's future. Students develop skills, concepts, and methodologies in music theory, composition, musicians, music history, arrangements, orchestration, improvisation, conducting, and musical performance.
And students also learn how to teach. Learn to meet the needs ofavariety of learners and incorporate skills into educational practice. Students will understand how history and culture shape and influence contemporary music while applying historical and current educational techniques to facilitate teaching and learning.
Recital Performance (2 semesters) -2credits
Instrument Major (4 semesters) - 12 credits
Introduction to Music Education -3credits
Music Theory (5 Levels) - 15 credits
Piano Teaching Method -2credits
CCM Piano (4 semesters) - 8 credits
Advanced Choir (2 semesters) -4credits
음악교육 학사과정은 여러분이 미얀마 음악계의 미래를 이끌어가는 음악교육자가 될 수 있도록 준비시킵니다. 학생들은 음악 이론, 작곡, 음악가, 음악 역사, 편곡, 오케스트레이션, 즉흥 연주, 지휘 및 음악 공연에서 기술, 개념 및 방법론을 개발합니다.
그리고 학생들은 가르치는 법도 배웁니다. 다양한 학습자의 요구를 충족하고 기술을 교육적 실습에 통합하는 방법을 배웁니다. 학생들은 교육과 학습을 촉진하기 위해 역사 및 현재의 교육 관행을 적용하면서 역사와 문화가 현대 음악을 형성하고 영향을 미치는 방식을 이해하게됩니다.
တပညာမှအနုပညာဘွဲ့သည်သင့်အားမြန်မာဂီတလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အနာဂတ်ကို ဦး ဆောင်နေသောဂီတပညာပေးသူဖြစ်လာရန်ပြင်ဆင်သည်။ ကျောင်းသားများသည်ဂီတသီအိုရီ၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ဂီတပညာရှင်များ၊ တေးဂီတသမိုင်း၊ အစီအစဉ်များ၊ သံစုံတီးဝိုင်း၊ ကြံဆတီထွင်မှု၊
ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေလည်းဘယ်လိုသင်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတယ်။ သင်ယူသူအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ပညာရေးအလေ့အကျင့်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုထည့်သွင်းရန်သင်ယူပါ။ သင်ကြားရေးနှင့်သင်ကြားမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်သမိုင်းနှင့်လက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကျောင်းသားများသည်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအားခေတ်ပြိုင်ဂီတကိုမည်သို့ပုံသွင်းခြင်းနှင့်သြဇာသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။